Madheshvani : The voice of Madhesh - नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगाउन हिन्दूराष्ट्र हुनैपर्छ : सन्तोष पटेल
अध्यक्ष, हिन्दू परिषद् नेपाल
० तपाइँले यही वर्षभित्र नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुने दाबी गर्नुभएको छ, कस्तो छ तयारी ?
— हामीले विभिन्न मञ्चहरूमा भन्ने गरेका छौं कि आगामी चैत मसान्तसम्म नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउने । देशमा अहिले राम्रो माहौल बनिरहेको छ । आफ्नो धर्म र संस्कृतिको रक्षाका लागि नेपालीहरू हातेमालो गरेर एकीकृत भइरहेको अवस्था छ । विदेशमा नेपालीहरू पनि आफ्नो पहिचानका लागि सजग भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले, अहिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एक राम्रो माहौल बन्दै गएको हो । विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा पनि हिन्दू राष्ट्रको बहस चलिरहेकोले राजनीतिक दलहरूमा कुन दिन भूकम्प आउने हो, त्यसको ठेगान छैन । त्यसैले नेताहरू पनि हिन्दूराष्ट्रप्रति सकारात्मक हुँदै गइरहेका छन् । अब चाँडै राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्दैछौं । पुसदेखि हामीले एक्सन ओरिएन्टेड कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं ।
० यो वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ त ?
— हो । किनभने नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब दिइरहेको अवस्था छ । हाम्रा नेताहरूले पैसाका लागि मात्र हिन्दू हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाएको कुरा आमनेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । विश्वमा धेरै मुलुकहरू आफ्नो धर्मको नामले चिनिएका छन् । विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाल नै हो । त्यसैले, विश्वकै सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पनि चाहना यही रहेकोले अब हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ ।
० नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ ?
— स्वाभाविकरूपमा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाल नै हो । उनीहरूको पनि सुभेक्छा छ कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ । खासगरी नेपालीहरूको पहिचान नै हिन्दू राष्ट्रसँग जोडिएकोले नेपाललाई हिन्दू बनाउन अति नै आवश्यक छ । धर्मनिरपेक्षको आडमा नेपालमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू चलखेल गरिरहेका छन् । धेरै मात्रामा धर्म परिवर्तन भयो भने यो मुलुक विखण्डनतिर जाने खतरा रहेको छ । नेपालमा इसाई र इस्लामिक मेसिनरीहरूले तीव्रगतिले काम गरिरहेकोले समाजमा ठूलो खाडल ल्याउँछ र विद्रोह गराउँछ । मुलुकलाई विखण्डनबाट जोगाउन र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्न हिन्दूराष्ट्र हुनैपर्छ ।
० धर्मनिरपेक्षताले मुलुक कसरी विखण्डन हुन्छ त ?
— धर्मनिरपेक्षको आडमा जबरजस्ती हिन्दूहरूलाई धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् । धर्म धेरै परिवर्तन भयो भने सामाजिक विद्रोह ल्याउँछ । किनभने जुन ठाउँमा पहिले हिन्दू र मुस्लिम समुदाय मिलेर बसिरहेका थिए, तर जबदेखि आयातित मुस्लिमहरू प्रवेश गरे अनि हिन्दूमाथि तराईमा आक्रमणका घटनाहरू धेरै भइरहेका छन् । पहाडका जिल्लाहरूमा दिदीबहिनीहरूसँग लभजिहादको नाउँमा जबरजस्ती प्रेम विवाह गर्ने र मुस्लिम धर्म लाद्ने कार्यहरू पनि भइरहेका छन् । पहाडका जिल्लामा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने, हिन्दूलाई क्रिष्चियन बनाउने लगायतका कार्यहरू भइरहेका छन् । धेरै धर्म परिवर्तन भयो भने उनीहरूले पनि भोली आफ्नो राज्य माग्न सक्छ, अनावश्यक बखेडाहरू गर्न थाल्छन् र मुलुकलाई विखण्डनतिर लान्छ । केही दिन अगाडि नेपाललाई क्रिश्चियन राष्ट्र घोषणा गराउनका लागि काठमाडौंमा पनि कार्यक्रम भएकै हो । तर, त्यसबाट नेपाली जनता सजग छन् । नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदा कुनै धर्मावलम्बीमाथि खतरा थिएन । मुस्लिम, क्रिश्चियन कन्ट्री र खासगरी युरोपियन युनियनले पैसाको खोलो बगाएर नेपाललाई जबरजस्ती धर्मनिरपेक्ष बनाइएको हो ।
० नेपाल हिन्दूराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष कसरी भयो त ?
— जब राजालाई हटाइयो त्यो बेला विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले नेपाललाई अशान्त बनाउन यस्तो षड्यन्त्र गरेका छन् । विश्वमा नेपाल मात्रै एउटा हिन्दूराष्ट्र थियो र हिन्दूहरूको अस्तित्व मेटाउनका लागि इस्लामिक र इसाईयीकरण मेसिनरीले राष्ट्रिय नेताहरूलाई किनमेल गरेर रातारात नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । धर्मनिरपेक्ष कुनै पनि दलको एजेन्डा थिएन । जनतालाई झुक्याएर नेताहरू विदेशीको इशारामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएका छन् । त्यसैले धर्मनिरपेक्ष आयातित शब्द हो ।
० नेपालमा राजतन्त्र हुँदा हिन्दूराष्ट्र थियो, राजतन्त्र हट्दा धर्मनिरपेक्ष भयो । भनेपछि हिन्दूराष्ट्र कायम गराउन पुनः राजतन्त्र चाहिन्छ कि ?
— हिन्दूराष्ट्र र राजा फरक–फरक विषय हो । नेपालको पहिचान राजाबाट भएको छैन, हिन्दूराष्ट्रबाट नेपालको पहिचान विश्वमा भएको हो । हिन्दूराष्ट्रको कुरा गर्दैमा राजावादी भइँदैन । केही राजावादी हिन्दू हुनसक्छन् तर सबै हिन्दू राजावादी होइनन् । हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ कि यो देशमा शासन जसले गरोस् तर नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ । हामी राजाको समर्थक होइनौं ।
० हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासँग केही न केही त कनेक्सन छ नि ?
— हैन, राजा भनेको छुट्टै विषय हो । राजावादीहरूले के गर्छन् त्यो उहाँहरूको विषय हो । हामी राजाकोा वकालत गर्दैनौं । नेपाली पहिचान भनेको हिन्दूराष्ट्र हो, त्यसैले हिन्दू परिषद् आफ्नो अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको छ । हामी चाडै नै एउटा राष्ट्रिय गठबन्धनको माध्यमले अभियान चलाउँछौं । अहिले हामीले लाखौं नेपालीहरूलाई संगठित गरेका छौं । राजा र हिन्दूराष्ट्र दुइटै फरक–फरक विषय हुन् ।
० तपाइँहरू राजाबाट परिचालित हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंका पनि गरिँदैछ नि ?
— हामी कहींबाट परिचालित छैनौं । हिन्दूको कुरा गर्दैमा राजावादी भइँदैन । इसाई र इस्लामिक देशका केही एजेन्टहरूले यस्ता प्रचारबाजी गरेका होलान् । म गेरूवा वस्त्र गराउँछु भने कसै–कसैले भन्छन् कि भारतबाट परिचालित हो । के भारतीयले मात्रै गेरूवा वस्त्र लगाउन सक्छन् ? नेपालीको छोराले लगाउन सक्दैनन् भन्ने कहाँ लेखेको छ ? जो पनि हिन्दूप्रति आस्थावान छन्, सबैले आआफ्नो तरिकाले वस्त्र लगाउने, पूजापाठ गर्ने मौलिक हक हो ।
० नेपालमा बलीप्रथाको पनि विरोध भइरहेको छ, तर तपाइँहरूले त्यसलाई धार्मिक आस्थामाथिको प्रहारको हेर्नुहुन्छ । बली दिनुपर्छ भन्ने कुरा कुन धर्म वा शास्त्रमा लेखिएको छ ?
— विश्वमा पहिले आएकै सनातन धर्म हो, त्यसबाटै कपिपेस्ट गरेर अन्य धर्महरू पैदा भएका छन् । सनातन धर्ममा देवीलाई बली चढाइन्छ । आस्थाले लड्डु चढाउने वा नरिवल वा चुनरी चढाउने हो त्यो श्रद्धा गरिन्छ । तर, आज गढीमाईको बलीलाई एउटा प्रोपोगण्डा बनाइदिएको छ । गढीमाई मान्छेहरूले आस्थाले बली चढाउँछन् । त्यहाँ कहीं पनि लेखिएको छैन कि गढीमाईमा आउँदा बली नै चढाउनुपर्छ । मान्छेको आस्था हो, उसले भाकल गरेको कुरा पूरा हुन्छ भने उसले श्रद्धाले बली चढाउँछन् । यदि बली बन्द गर्ने हो भने सबै प्रकारका बली बन्द गरिनुपर्छ । खाली हिन्दूका लागि मात्रै यस्तो कुरा उठ्छ ? यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि हिन्दूको अस्तित्व समाप्त गर्नका लागि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेका छन् ।
० बलीप्रथाको विकल्प के हुनसक्छ ?
— यसको विकल्प छन् । मन्दिर जाँदा कहीं पनि लेखिएको हुँदैन कि बली चढाउनुपर्छ । बली चढाउने भनेको श्रद्धाले हो । जसले बलीप्रथा बन्द गर्नुपर्छ भन्छन् उनीहरू नै मासु खान्छन् । हिन्दूत्वको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न केही विदेशी शक्तिहरू लागेका छन् ।
० तपाइँले आफ्नो संगठनलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभएको छ, कस्तो आन्दोलन ?
— हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । हिन्दूराष्ट्र हाम्रो एकसूत्रीय माग हो । नेपालीको पहिचानका लागि जे कुर्बानी दिनुपर्छ त्यसका हाम्रा साथीहरू मानसिकरूपमा तयार हुनुपर्छ । त्यो तयारीका लागि पनि राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनपछि देशभरि हामीले रिले अनसनका कार्यक्रमहरू गर्छौं । संसद भवन घेराउदेखि लिएर विभिन्न प्रमुख व्यक्तिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू छन् । पुसदेखि हामी एक्सन ओरिएन्टेड कार्यक्रममा लाग्छौं ।